Nge-parachute - isiyalo kakhulu futhi kuhilela izinga eliphakeme lobungozi baphile futhi babe nempilo, kodwa nokho namanje kuyavumelana ngokunamandla kangaka ukuphila komuntu yesimanje. Futhi uma abadala banesibopho ukuphepha yabo nempilo bebodwa, intsha ngubani dream ukwenza indiza ezinjalo ezixakile, abanesifiso sokwazi kuba iminyaka emingaki kungenzeka gxuma nge-parachute.
Sizozama ukuphendula le nezinye izindaba eziningi ezibalulekile eziphathelene izingane nje kuphela kodwa futhi abadala.
Ngaphambi phakamisa emoyeni umuntu wanquma ukuba siziphonse phansi sisuka indiza, uzocelwa ukuba ngisayine ipheshana elithi ukuthi ubunjalo gxuma ikhethwa ngokuzithandela, futhi uma izinkinga musa ukufuna ukuba.
Uneminyaka emingaki gxuma kungaba nge-parachute?
I engenhla age umkhawulo kuncike empilweni womuntu, ngubani ofuna ukwenza eqa.
Ngalinye club kubhaliswe ngokusemthethweni, ogama imisebenzi axhunyiwe ne-parachute has imibhalo ethize, okhombisa lokho ubudala ungakwazi sifinyelele nge-parachute. Ukuze ukweqa avunyelwe abantu abazimele Usufike abaneminyaka engu-14. Ezinye amakilabhu uvumele iminyaka izingane okungenani 16.
Le mfuneko esemqoka kuyinto igunya elibhaliwe nabazali bazo noma abameleli zezomthetho ingane. amakilabhu abaningi bami kwelokuthi ku ebukhoneni nabazali.
Ngaphambi umbambiqhaza ngamunye kumele alethe incwadi kadokotela eqinisekisa ukuqina ngenxa yezizathu zempilo, aqeqeshwe nokwenza izinhlelo zokuqeqesha. Kukhona izindawo, okuvumela Skydiving esihambisana ngomfundisi kusukela kwabaneminyaka engamashumi 9 ubudala.
Izimpendulo zemibuzo kunazo ukuphokophela
On umbuzo ukuthi, lokho ubudala ungakwazi sifinyelele nge-parachute, kungenzeka ukunikeza impendulo kubhekwa yobudala elilungile iminyaka 14-16, hhayi ngaphambi kwalokho.
Ngaphambi kokwenza uhambo, abafundisi kanye club ukuhlola izimo sezulu kanye nezinga izenzo zokuvikeleka. Skydiving uzibophezele e windless, isimo sezulu Licwathile. Ngezinye izikhathi, imikhawulo cha, konke kuncike sezulu.
Isisindo esincane lapho bavunyelwe gxuma, - 45 kg, esiphezulu - 95 kg.
Ukuze gxuma lokuqala 800-900 amamitha kubhekwa ukuphakama elilungile.
Awudingi ukuba banamathele indlela yokudla ehambisana nempilo ezikhethekile noma kwemithetho yokudla.
Ukwehla iyona parachute zihamba ngesivinini esingamakhilomitha 5 m / s.
Ubungozi bokulimala lapho lihlala empeleni eliphezulu kakhulu, ngakho-ke Kunconywa ukwenza indiza kuqala Ngohlelo, bese ulandela yonke imiyalelo ofundisayo.
Ukwesaba ayikwazi ukunqoba, kodwa uma ufuna, une ngemva gxuma it is ngokushesha indawo imizwelo ezahlukene ngokuphelele.
yalutho ukuba bayiphuze ngenxa isibindi, utshwala isinyathelo icacisa isikhathi. Endabeni engcono, umuntu engakutholi esesimweni esinjalo umbono ofanele futhi ubumnandi. Enye - a injabulo namandla futhi uwohloke kungenzeka ekuqulekeni.
Lapho kubanda kungcono ukuba ayiyeke le indiza, wena kungalimaza eardrums futhi sinuses. Uhambo lokuqala luzoba Yiqiniso, kumelwe ukuba kwenzeke esihambisana ngomfundisi. Uma uzibuze ngasiphi yobudala kungaba Skydive nge ngomfundisi, kubalulekile ukuba ucacise ngqo kule club.
Intengo kuthintwa izici eziningi - kusukela imvelo club kumasevisi ezengeziwe (isithombe nevidiyo). Ngokwesilinganiso, intengo iqala ruble 6000, futhi engenayo can ruble kuya ku-20 000. Lokhu izindleko akubandakanyi ngokudubula ku-elethronikhi. Intengo ezinsizakalweni ezifana ruble 2000-3000.
Zonke design zanamuhla okuthembekile, okuhlala isikhathi eside futhi ifakwe parachute Reserve. Uma kudingekile, umfundisi kuzosiza ukuvula nokusebenzisa parachute yesibili, kodwa ngokuvamile lokhu kungadingeki.
Iseluleki ukwenza kuzuba esihambisana zifiki, babe ngempendulo esheshayo zimo futhi umuzwa uvumbulula amasondo esikhululekile, kungenjalo akunakwenzeka ukuthola ilayisensi.
Iseluleki ukwenza kuzuba esihambisana zifiki babe ngempendulo esheshayo zimo futhi umuzwa uvumbulula amasondo esikhululekile, kungenjalo akunakwenzeka ukuthola ilayisensi.
Funda ukuthi ungabasiza kanjani kuba iminyaka emingaki kungenzeka gxuma nge-parachute, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba aqale ukuzilolonga lapho. Nokho, kumelwe wazi ukuthi akuyona yonke avunyelwe gxuma ngisho esinamandla namathuba. Kukhona Izimo ezithile ezifana emisebenzini yokuzilibazisa kakhulu:
chronic isifo oyingozi;
ukungasebenzi yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi;
phakathi isifo indlebe;
eqinile esifushane okwesa-;
ukulimala Foot, ukhalo noma emgogodleni amathambo.
Abavunyelwe gxuma abantu high blood pressure, abesifazane abakhulelwe kanye nezingane ezisencane.
Kubalulekile ukukhetha lesifanele parachute club
Kukhona imithetho emibili ukukhumbula, into yokuqala - ukuze ukhethe club ethandwa, kuyinto efiselekayo ngoba izincomo. Eyesibili umthetho - asikho isidingo londoloza. fuel Good, indiza okuqukethwe, imishini kanye abafundisi - konke lokhu kubiza imali, ngakho gxuma akukwazi ezishibhile. Uma ahlinzekwa intengo eyehliswe kakhulu, ngakho ukuze ulondoloze okuthile, kodwa ukonga kungamenza alahlekelwe ukuphila.
I club Kufanele kukhethwe ngokuvumelana nemithetho elandelayo:
ngesikhathi isikhungo kumele kube indaba ezinhle;
kubalulekile ngithande yonke imininingwane (ukuphakama gxuma, uhlobo parachute, khona PPKU), kulokho yobudala can gxuma parachute nge ngomfundisi;
asikho isidingo ugcine ekilabhini;
ukulungiswa kubalulekile ukuba sikuthathe njengokungathi sína.
Umhlahlandlela inikeza amaqembu amaningi zidlule ukuqeqeshwa okusheshayo, ukuthi ifomu onomfutho futhi asheshisa. i samuntu okunjalo kufanelekile gxuma kusuka ukuphakama wamamitha angu-800. Uma uhlela on ukuvula parachute ezingeni ukuphakama 3 km nangaphezulu, kungcono ukuba ungenele esikoleni esikhethekile futhi akufezi ngokuqeqeshwa evamile.
Ukushushuluza. unqamule izwe amazinga Ukushushuluza.